SIDA LOO DIYAARIYO ISTEROBERI XILLIGA JIILAALKA: CUNTADA SIDA MACAANKA, MACAANKA, KAROOTADA IYO NACNACYADA KALE - KU'SAABSAN
Xulashada cuntada sida lo'da ee goosashada ee jiilaalka
Bisaylkiisa isbeddelka beerta ayaa tilmaamaya dhammaadka xagaaga. Waxaad ku keydsan kartaa gabal ah adoo diyaarinaya miro kulaylka ah jiilaalka. Caano, jamsi, marmalades, waxsoosaarka, sharoobada iyo miraha la isku qurxiyo, iyo sidoo kale macmacaanka la sameynaayo, waxay iftiiminayaan maalmaha qaboobaha iyo habeenkii qabooba.
Roodhiga Jamaanka ah
Cunnada cuntooyinka pear ee xilliga jiilaalka waa kala duwanyihiin, oo ku dhowaad dhammaantood waa la diyaariyaa iyada oo aan la isticmaalin nidaamka jeermiska.
Cajiibka pear Classic
Macaanka pear caadiga ah waa u fiican shaah iyo sida buuxinta for dubista.
Isteroberi - 2 kg
Sonkor - 2.5 kg
Biyaha - 400 ml
Kiimikada dhaqday, jarjar, ka saar lafaha iyo asliga ah. Iska yaree miro yar yar oo ku dar digsi karinta. Ku dabool sonkorta kuna rid meel qabow afar saacadood. Biyaha ayaa loo baahan yahay haddii noocyada kala duwan ee isteroberi uusan aheyn mid casiir leh oo adag. Marka pear siinayaa casiirka, geli dabka iyo isku kari ah. Ka dib marka uu booguhu waxyeello u gooyo, yareeyo kuleylka iyo kariyo saacad badhkeed, kareyso massa waqti ka waqti. Ku rid macaanka barmiilka iyo meel u dhow.
Geedka juuska leh Lemon
Cunnada cuntada laga gooyo waa sahlan tahay isu diyaarinta iyo isfahamyada xiisaha leh. Isterobar waxaa si fiican loogu daraa liinta, iyo carafka marka karinta ay tahay mid cajiib ah.
Lemons - 3 xabbo
Ku dhaq oo nadiifi miro ka jirida iyo abuurka, jarjar xabadaha iyo meel saxan si aad u kariso. Liida Grem leh Booqday Furimaha Dagaalka hilib ah oo la socda dhar, gelin on pears. Iska ilaali miro oo ku dar sonkorta. Ku rid pear saddex saacadood qol qabow. Marka cufnaanta la buuxiyo juice iyo sonkortu, ku rid dabka iyo isku kari ah. Ka dib markii la kariyo, isku kari saacad kuleylka hooseeya. Ku rid macmacaanka ku dhex jira dhalooyinka, isku ururi oo dabool wax diiran. Ha ilaawin inaad si joogto ah u walaaqdo oo uga saarto xumbo.
Kalluunka iyo Lingonberry Jam
Lingonberries waa miro aad u faa'iido leh, laakiin waxay dhif u tahay inay macaanka ka soo macaan, doorbido in lagu daro miro. Isku day inaad ku kariso pear iyo macaanka lingonberry, dhadhanka ku farxi doonaa aad.
Isteroberi - 1 kg
Lingonberry - 0.5 kg
Miro la gooyey oo la jarjarey, waxay ka fiican tahay in laga saaro maqaarka adag. Ku rid buundada digsi, ku dar cawska cusub ama aad horay uga dhajisey qaboojiyaha. Daadi sonkorta, ku dar biyo, walaaq oo dabka saar. Ka dib markii la karkariyo, yareeyo kulaylka iyo kari ilaa 50 daqiiqo, kareyso marmar. Jam ayaa soo jiidi doona qaab bataati la shiiday. Ku rid miisaanka diyaarsan ee dhalooyinka iyo xir daboolka.
Miraha ku'saabsan leh miraha poppy
Caanaha lo'da waxaa lagu helaa dhadhan aan caadi aheyn, iyo buuxinta noocaas ah waa raadin qiimo leh oo loo yaqaan pies.
Isteroberi - 0.5 kg
Sonkor - 125,
Casiir liin - 2 tbsp. l
Mack - 1 tbsp. l iyadoo la raacayo
Miraha jarjar yaryar, ku dar sonkorta, ku dar liin ah (hal qaaddo), ka tag fasax. Inkasta oo ay ku jirto shiil digsi digsi ah ilaa saddex daqiiqo. Marka pear-ka samee casiirka, geli dabka; Haddii aad jeceshahay dukaanka, ku dar buclaal si aad u tiro badan. Karkari miskaha ilaa 20 daqiiqo, ka dibna ka saar nusqaashka digsiga ka dibna jarjar. Isku qas shinni dubey iyo dubbe oo liin, ku soo celi digsiga. Karkari oo dhan dhan toban daqiiqo, kadibna ka qaad dabka. Ku kaydi sidoo kale gasacadaha.
Wixii macaanka loo yaqaan 'pear pear', miraha dheeraadka ah iyo tufaaxa ayaa badanaa la isticmaalaa.
Si aad u bilawdo isteroberi u baahan tahay in la dhaqo, gooyaa diirka oo ka saar core. Iskalaji isbaarada ku dar juuska yaryar oo si tartiib ah ugu kari biyo ilaa jilicsan.
Sonkorta waxay qaadataa qaybta saddexaad ee tirada isteroberi. Iskudheerta dillaacsan ama la jarjaro sheyga. Ku dar sonkorta biyaha haray ee digsiga iyo walaaq ilaa kala diri. Ku rid dhuxusha si aad u kariso sharoobada iyo kariyo ilaa ay biyuhu qarqaan, baaxadduna ay badh noqoto. Cufnaanta macaanka ayaa lagu baari karaa adigoo ku dhufanaya qaadada kuxiga hoose ee dheriga. Haddii xajku uu si tartiib ah u galo xargaha, waxaa macaanku diyaar u yahay. Faafi macaanka bangiyada.
Waa muhiim! Maraqa juuska waxaa la dhigaa dhalooyinka laisugu shubay oo aan la duuduubin, laakiin si adag u daboolan warqad xoqan leh, oo ku xiran nalka adag.
Jam laga bilaabo isteroberi leh liinta
Recipe for macaanka pear delicious iyo carafa ma kaa tagi doonaa indifferent.
Cuntada aad u baahan tahay:
Kiimiko - 3 kg
Milyadaha - 1.5 kg
Sonkor - 600 g
Laga soo bilaabo pears la dhaqay maqaarka ayaa laga saarayaa, asalka iyo dhagaxyada ayaa la saaraa. Miraha googooyaa yar yar. Dhaqdhaqaaqa liin, tirtir oo xoq u laab. Kadibna ka saar daaha caddaanka ah ee liinta iyo ka gooyaa wareegga siddeedaad. Ku shub 100 ml oo biyo ah boorsada wax lagu kariyo, ku dheji pear iyo liimiin leh jilicsan, sonkor iyo karkarin.
Kadibna yareeyo kuleylka iyo kari ilaa nus saac. Cuntada badan ee soo baxa ee isku rarida iyo dabka ku shub saacad kale. Haddii aad jeceshahay suugo aad u qoto dheer, waxaad u baahan tahay inaad kordhiso waqtiga. Malmalaado Ready ku riday dhalooyinka, buuxinta hoosteeda sare, xir daboolka.
Kiimikada iyo Apple Jam
Wixii macaanka miro ka soo jiidan leh tufaax, qaado nooc ka mid ah tufaax macaan iyo dhir leh sidaas darteed macaanka ma aha mid aad u xoqan.
Isteroberi - 6 kg
Tufaax - 3 kg
Biyaha - 600 ml
Sonkorta - 5 kg
Qori - qanjaruufo
Ku dhaq miro, diirka iyo jarjar xabadaha. Ku rid digsi, ku dabool biyo iyo isku kari ilaa inta jilicsan, ka dibna ku jar jarjar. Tufaaxa ku shub sonkorta iyo kariyo ilaa qaro weyn, kareyso, kuleylka hooseeya. Ku dar qoriga si macaanka loo dhammeeyey, si fiican u walaaq oo ku rid dhalooyinka.
Maraqa juuska, karootada iyo wax yar oo sonkor ah, waxay noqon doontaa cunto aad u qurux badan, oo ku habboon buuxinta cows iyo pies. Kudar macmacaan ku duban karo dubista.
Wixii macaanka pear ku haboon miro yar oo macaan.
Sonkorta - 500 g
Qorfe iyo basbaaska
Ku dhaq miro iyo khudradda miraha iyo diirka. Iska yaree qaybo dhexdhexaad ah, ku dar sonkorta iyo isku dar. Xaji masska si joogta ah si siman adigoo isticmaalaya blender, ku dar qorfe, vanilj iyo casiir ka mid ah liin. Walaaq oo dabka saar, ku karkar. Markaas ka weyn kuleylka sare, kareyso si adag, isku kari ilaa nus saac. Ha ilaawin inaad xaaqdo xumbada. Ku rid macaanka kulul ee xabadaha oo xir daboolka.
Kiimikada iyo Khudaarta
Kiimikada iyo Khudaarta - Tani waxay tahay waxa ugu macquulsan ee laga samayn karo isteroberi.
Fersken - 1 kg
Sonkorta - 900 g
Peel juuska iyo fershada iyo jarjar. Xidho saxarka labada miraha leh labeenta ilaa inta la shiidayo. Isku dar karkari, ku dar sonkorta iyo dabka saar. Karkari kuleyl dhexdhexaad ah, kareyso oo ka saari xumbada. Macmacaanku wuxuu diyaar u yahay marka uu culeysku noqdo mid culus oo bilaabaya inuu hoos ugu dhajiyo xagga hoose. Mass, ku rid dhalooyinka nadiif ah, isku duub.
Maraqa iyo saxaradda
Plums ee macaanka ayaa siin doona ma aha oo kaliya dhadhan xiiso leh, laakiin sidoo kale midab qurux badan.
Isteroberi soo socda - 500 g
Plom karkarin - 500 g
Sonkor - 1100 g
Biyaha - 50 ml
Ku dhaq miro iyo ka saar lafaha, waxaa lagula talinayaa in laga saaro diirka ka soo miskaha haddii ay adag tahay. Iska yaree isteroberi iyo duubka qaybo yaryar. Marka hore karkariyo biyaha, shan daqiiqo ka dib karkarinta. Ku wareeji pear-ka iyaga, u qaado karkarinta, ku dar sonkorta, mar kale karkari. Inkastoo macaanka uu karkariyo, ka saar xumbada iyo walaaq. Ka dib marka aad kuleysato kuleylka hooseeyo, qabow shan daqiiqo oo kale. Kaddibna iska sii daa, wax yar ku qabso oo ka beddel saxanka.
Pearled pears ee jiilaalka waxaa loo isticmaali karaa labadaba adiga oo lagu daro suxuun kasta.
Biyaha - 0.5 L
Sonkor - 250 g
Sisin - 1 tbsp. l
Basbaas (macaan) - 4 digir
Qoraxda - afar meelood oo ulaha
Dooro miro dhexdhexaad ah nadiifi maqaarka iyo asaasiga, hoos u dhig laba daqiiqadood biyo karkaraya. Ku rid dhalooyinka Wixii marinade ah, qaso maaddooyinka haray iyo karkariyo. Buuxi miro leh marinade kulul, ka dibna ku dhaji khaliijka muddo 10 daqiiqo ah (saddex litir - 15 daqiiqo). Bangiyada ayaa isku duuban, lagu kaydiyaa godad qabow.
Digniin! Si loo pears ma lumin jilicsan iyo qaabka, for pickling, dooran kaliya miro cufan.
Maraqa bubbada badda barkthorn
Haddii aad ka soo jarto juice laga bilaabo juuska for jiilaalka, ka dibna waa hubaal waa in ay noqdaan doorashada ugu faa'iido badan. Tusaale ahaan, casiir leh baalal-badeed badda.
Baalalka badda - 1.5 kg
Ku dhaq pears, saaro asaasiga iyo maqaarka, jarjar qaybo dhexdhexaad ah. Ku rid miro la jarjarey oo digsi ku darsaday, ku dar miro yar oo buckthorn iyo sonkorta. Iska ilaali inaad u bukoodo 35 saacadood. Ka daadi juice soo dhalaalaya saxan kale oo isku karsaaraya, ka dibna ku shub kuleylka barxad laisugu shubay, pasteurize 15 daqiiqo oo duub. Ku kaydi meel qabow, ugu yaraan dooro laba bilood ka badan.
Ma taqaanaa? Berry burrinka badda waxay ka mid yihiin dabeecadda ugu qiimaha badan. Waxaa ku jira fitamiino A, C, B1, B2, B6, E, F, P, K. Folic acid, amino acids, tannins, flavonoids, carotene, macro iyo mareeyn. Saliida buckthorn ee badda waa saliida kaliya ee saliidda leh ee saliidda gubi kara oo aaney fududayn karin xanuunka, lakiin daawo.
Kiimikada sharoobada ah ayaa markaa kaa yaabin doonta dhadhanka cusub ee miraha. Haddii aad jeceshahay in aad karisid, meelaha banaan ee jira waxaa jira meesha loo raro khudradda. Tani ma aha oo kaliya keega: salad, suxuunta hilibka, suugada.
Waxyaabaha ay ka kooban tahay (lagu xisaabiyo saxanka saddex-litir):
Biyaha - 2 l
Citric acid - 4 g
Sonkorta - 400 g
Ku dhaq pears iyo si tartiib ah uga saar caws. Ku rid buundada qashinka, waxaad u baahan tahay inaad ogaato lambarkooda. Kadib markaad isku dayeyso, ku rid miro digsi ah, ku dar sonkorta kuna dar biyo. Kulayl dhexdhexaad ah ayaa sugaya goobooyinka ugu horreeya ee biyaha, oo tilmaamaya karkarinta. Miraha la gaarsiiyo iyo saaray isteroberi ee barmiil jeermis dilay, iyo u sii biyo iyo sonkorta sonkorta. Ku dar qandhicir iyo sharoobada miro iyo duub. Waxay u baahan yihiin in loo rogo buste ka hor inta aan la qaboojin.
Khudaarta Khudaarta Khudaarta
Khudaarta laysku daro iyada oo aan lagu darin qaybo kale oo isku mid ah waxay noqon doontaa mid aan haboonayn labadaba dhadhanka iyo midabka, sidaas darteed, inta badan waxaa loo diyaariyaa in lagu daro miraha kale iyo berry, ama citric acid, naadi, vanilj lagu daro si kor loogu qaado dhadhanka iyo dhadhanka xooggan.
Xiiso leh Sida laga soo xigtay archaeologists, dhirta pear ku saabsan saddex kun oo sano. Dhumucyada dheeraadka ah ee miraha la helay ayaa laga heley magaalooyinka qadiimka ah ee casriga ah ee Switzerland iyo Talyaaniga, muuqaalkii isteroberi waxaa laga helaa frescoes ee lagu kaydiyo Pompeii.
Cuntada caadiga ah ee compote loo jeexay jiilaalka:
Waxyaabaha ay ka kooban tahay (loogu talagalay 1.5 litir oo ganaax ah):
Sonkor - 100 g
Citric acid - 0.5 tsp.
Biyaha - 1.25 L
Vanillin - qanjirada
Magaash - 3 ayaa baxa
Miro dhexdhexaad ah, maydhin oo, saaro asaasiga, jarjar rubuc. Ku rid buundada ku jirta weel, ku dar sonkorta iyo ku shub biyo karkaraya hoostiisa. Is dabajooga dabool, si tartiib ah u soo rog oo ku rid buste ka hor qaboojinta. Bangiyada iyo daboolka waa in la nadiifiyaa. Ku kaydi meel qabow oo qalalan.
Ku'saabsan iskuna leh dhirta
Wixii compote ah ee tufaax iyo isteroberi, dooro miro dhan bislaaday, sababtoo ah ee ku celi this midhaha waxaa la gelin doonaa weel aan la jarjaran.
Qaado miraha dhexdhexaadka ah, isku beddel tirada inta aan dheriga la buuxin. Sugar loogu talagalay saddex-litir waxay u baahan karaan 500 g Haddii aad sameysid punctures in miro, compote waxay yeelan doontaa dhadhan dheeraad ah. Haysashada xayawaanka, ku shub biyo karkaraya miro ku jirta weelka, ha u istaagaan 10 daqiiqo. Ka dibna biyaha ku shub digsi ama digsi-digsi iyo, ka buuxi sonkorta, karkari sharoobada. Marka sharoobada sharoobo, si tartiib ah ugu shub weel weelka daboolka. Badeecadda rogo oo iska tag si aad u qabato buste.
Khudradda furaha leh ee Dogwood
Kizil ayaa siin doona pear-ka in ay ku daabacaan maqaayad iyo jimicsi.
Waxyaabaha ay ka kooban tahay (oo lagu xisaabiyey lix litir oo compote ah):
Cornel - 4 muraayad
Kiimiko - 5 gogo '
Waxaa lagu talinayaa in la doorto isteroberi aan la tirtirin, laakiin casiir leh, iyo Cornel waa bislaado, madow. Ku dhaq miraha iyo berry, ka saar caws, miskaha diirka ka soo jeeda iyo jarjar qaybo dhexdhexaad ah. Xulashada ugu wanaagsan waxay noqon kartaa bangiyada saddex-litir. Bangiyada loogu talagalay saddexaad oo ka buuxsantay isteroberi iyo berry (dogwood ee kala bar laba bangiyada, isteroberi isku mid).
Wixii sharoobada, waxaad u baahan tahay 5 litir oo biyo ah, karkari sharoobada oo ku shub dhalooyinka, isaga oo ku daraya mitric acid. Shuban waxaa lagu shubi karaa dusha sare, laakiin "garabka". Bangiyada duuban, ku duudduuban buste si aad u qaboojiso. Ku kaydi godad, adigoo u mahadcelinaya kaydinta citric acid ma keeni doonto dhibaatooyin.
Kibirta la jiido miro yar
Wixii ku qasbo miro yar, dooro noocyo casaan ah ee berry.
Waxyaabaha ay ka kooban tahay (waxaa lagu xisaabiyaa 1.5 garaam):
Kiimiko (jarjaran) - 50 g
Sonkor - 125 g
Magaash - 4 caleemo
Ku dhaq berry miro yar, ha ka saarin dabo - aad dhaawici kartaa berry. Peel the pears, jarjar xaleef. Pierce ballaaran ee miro yar oo miro yar leh leh caday, ku rid miro iyo miraha ku jira weel, ku dar reexaanta. Buuxi waxyaabaha ku jira dheriga biyo karkaraya. Toban daqiiqo ka dib, biyuhu ka daadi khudradda. Sida ugu dhakhsaha badan ee sharoobada, ka saar kulaylka iyo si taxadar leh ku shub weel. Is dabaji digsiyada, ku duub, kadibna qaboojinta, ku kaydi meel qabow.
Kibirta kudubka leh canab
Wixii compote leh canab ku habboon kala duwan - kishmish.
Kiimiko - 4 gogo '
Canab - 2 sprigs
Sonkor - 300 g
Biyaha - 2.5 L
Karso sharoobada. Isteroberi, diiray oo la jarjarey, boco biyo ah dhowr daqiiqo, ka dibna ku rid weel. Ku dhaq canab, ka saar moyaha tufaaxa, ku rid weel. Shub walxaha sharoobada ah iyo nadiifinta weelka saacad badhkii ah digsi qoto dheer. Ka dibna xiro daboolka, isku duub oo iska tag si aad u qaboojiso.
Kibirta lakabka leh Lemon
Cuntadani waa fiicantahay sababtoo ah waxaad cuni kartaa miro khafiif ah malab, gaar ahaan waxtar u leh carruurta.
Lemon - 2 gogo '
Ku dhaq pears iyo liin, kala qaybin isteroberi ah hal dhibcood, saaro asaasiga. Ku rid pears ee digsiga, ku shub casiir ka mid ah liin iyo daboolo biyo, ka tago toban daqiiqo. Xakamee bangiyada. Kadibna ku dheji nuucyada bangiyada, isbeddelinta kuuliyada liin la jarjaray. On biyaha, kaas oo pears lagu qooyay, karkariyo sharoobada, buuxi qasacadaha leh sharoobada iyo isku ururin kulul. Demi daboolka, duub. Ka dib qaboojinta, ku kaydi qol mugdi, oo qalalan.
Ku'saabsan iskuna leh jiiraanka
Qoraalkan, maaddooyinka waxaa loogu talagalay weel hal litir ah.
Isteroberi - 1 miro
Gorfiga - caanaha
Sonkorta - 80 g
Dhejiyaan dhalooyinka iyo daboolka. Dhaqso jeeriga iyo isteroberi, ka tago jeeriga oo dhan, iyo gooyay isteroberi si xaleef ah si looga saaro asaasiga leh abuurka. In bangiyada ku rid pears iyo jeeriga, ku shub biyo karkaraya. Toban daqiiqo ka dib, biyo karkaraya oo karkari sharoobada. In saxan oo miro ah, ku dar qajaar, ku shub sharoobada diyaarisay. Isku duub oo dheji, rogo oo duudduuban, si aad u qaboojiso. Ku kaydi meel qalalan, oo qabow.
Xilliga jiilaalka, ma jiro khudrado iyo miraha cusub oo yaqaanno jirkeena iyo koritaanka aagageena cimilada. Habka kaliya ee loola dagaallamo avitaminosis waa in la soo saaro sahayda jiilaalka: qaboojiso, xafid oo gogol dhigo, qaadashada iyo karkarinta, qalalan iyo qalalan.
Alaabooyinka noocan oo kale ah jiilaalku ma keeno oo kaliya jirka, nafaqo leh fitamiinada: waxyaabihii loo diyaariyey jiilaalka waxay keenayaan farxad maskaxeed, kala duwanaanta doorashooyinka liidata ee xilliga jiilaalka.